Tonga eto ny finday. TSY ny tranokalanao. | Martech Zone
Tonga eto ny finday. TSY ny tranokalanao.
Zoma, Oktobra 7, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Izahay dia nitantana ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin'ity herinandro lasa ity ary nanontany hoe firy amin'ireo tranonkalanao no nohamarinina hijerena finday. Our Zom-pifidianana Zoomerang ny valiny dia fisarahana 50/50 mihitsy… ny antsasaky ny anao dia manana tranokala vonona ny hijerena finday na saika eo. Statistika mampalahelo izany.
Statistika mampalahelo izany satria ny tranonkala finday dia efa eto. Vao namoaka angona i Comscore izay 48% amin'ireo mpampiasa finday 112 tapitrisa ao Amerika izao ampiasao matetika ny fitaovan'izy ireo hidirana amin'ny atiny media, ankoatry ny feo na ny lahatsoratra ary hihoatra ny 50% amin'ny faran'ny taona.
Ireo tranonkala lehibe dia mitatitra ampahany betsaka amin'ny fifamoivoizany avy amin'ny finday: Nahazo 7.6% ny New York Times, nahazo 10% ny USA Today ary nahazo 11.2% ny LA Times. Ny habaky ny haino aman-jery sosialy dia mahita fitomboana lehibe kokoa, eo amin'ny 12.5%… ary mijanona 2.8 fotoana lava ny mpamaky!
Vao avy nandefa lahatsoratra vao haingana izahay Fomba 10 hamoahana ny atin'ny tranokalanao amin'ny finday. Tsy mitaky ny rafitry ny fitantanana atiny ho vonona amin'ny finday na dia vahaolana tsara kokoa aza izany.
Ny namantsika ao Marketpath dia nampiroborobo ny findainy tato ho ato fanomezana, milaza:
Ny famoronana kinova finday amin'ny tranokalanao dia manome ny mpihaino anao vahaolana izay mifanaraka amin'ny filàn'izy ireo finday, izay samy hafa be noho ny filàn'ny solosaina nentim-paharazana na mpampiasa internet amin'ny birao. Ireo mpampiasa Internet dia mitaky tranokala tsotra, haingana, ary mora fitetezana ary manome atiny izay misy ifandraisany amin'ny mpampiasa finday.
Raha miara-miasa amin'ny mpanome serivisy rindrambaiko tsy manana fomba hijerena mahomby ny atiny amin'ny telefaona finday ianao dia efa mametraka loza mety hitranga amin'ny fifamoivoizana. Gaga aho amin'ny firy ny rafitra misy any izay mbola tsy nanomboka namolavola styleheet finday akory, aza mieritreritra interface interface tsara ho an'ny finday.
Ny Econsultancy dia mamoaka torolàlana momba ny marketing amin'ny atiny B2B
Lisitra fanamarinana mailaka: Dingana 13 alohan'ny tsindrio alefanao!
7 Oktobra 2011 à 1:49
Nafana aho satria finday! Tsy ianao satria tsy ianao! Izany no antony, izao no antony, izao no mahamay ahy!